Usandula kufunyaniswa unesifo seswekile…. Wamkelekile eqeleni! Siyakuvuyela ukuba nawe apha, nangona ingeyonto uzikhethele yona. Xa uzama ukwazi malunga neendidi ezahlukeneyo zesifo seswekile, nokucacisela abantu ingakunceda ukwazi nzulu ukuba isebenza njani.Ihamba kanje…Ingaba ikhona imibuzo? Sifakele i-emeyile okanye ubuze kwiqela elikhulu laseMzantsi Afrika labantu abaphila nesifo seswekile iDiabetic South Africans.
Ukuqondisisa isifo seswekile
Ufuna ukwazi ukuba isifo seswekile sisebenza njani emzimbeni wakho? Nantsi ingcaciso elula.
Konke kuqala ngokutya. Ikhabhohayidratsi( ezaziwa njengesitatshi) ozityayo ziyaqhekezwa zibeyiglukhozi, uhlobo lweswekile. Leswekile ifunxwa ligazi elihamba emzimbeni zibe yiswekile yegazi. Ukuphuma kwehomoni yeinsulini esuka enjekeni yakho (pancreas) evumela ukuba le swekile idlule egazini iye kwiiseli ezivelisa amandla omzimba. Ngalendlela i-insulini incedisa ukulawula amazinga eswekile yegazi, ivumele umzimba ukuba usebenzise amandla asuka kwisitatshi.
Ebantwini abaphila nesifo seswekile, umzimba uvelisa i-insulini encinci okanye ingayivelisi nakancinci okanye umzimba awukwazi ukuyisebenzisa i-insulini kakuhle. Loo nto ithetha ukuba iglukhozi (esuka ekutyeni kwakho) ayidluli kakuhle ukusuka egazini lakho ukuya kwiiseli. Kakngangokuba, uglukhozi iyenyuka egazini lakho,yenze ukuba iswekile yegazi inyuke. Ekuhambeni kwexesha, iglukhozi ephezulu egazini ingenza umonokalo ezintsweni,emehlweni,kwinkqubo yovalo yomvimba nentliziyo.
Iindaba ezimnandi zezokuba ngesicwangciso sonyango esisiso ungakwazi ukulawula esisimo, ukuze uphile ubomi obude,ubusempilweni, nendlela yokuphila esebenzayoi Akukukho nto onoyenza xa ufunyaniswe unesifo seswekile- kufuneka uqaphelisise kuphela.
Khumbula oku kulandelayo (TEEL):
Yitya amayeza nepilisi zakho ngokomyalelo kagqirha
Yitya ukutya okusempilweni
Zilolonge, kancinci yonke imihla
Yehlisa umzimba, ukuba kuyadingeka
Iindidi zesifo seswekile
Ziipensenti ezi-5 ukuya kwipesenti ezili-10 zesifo seswekile. Udidi lokuqala lwesifo lubangela ukuba umzimba wakho usebenze ngendlela engaqhelekanga, apho umzimba uzijikelayo utshabalalise iiseli kwinjeke yakho ezivelisa i-insulini. Indibanisela ye-insulini yonke imihla kunye nesicwangciso sendlela yokutya siyafuneka ukuze ukwazi ukuyilawula.
Udidi lwesibini lwesifi seswekile
Ibalelwa kumyinge weepesenti ezingama-90 eengxelo, udidi lwesibini ludla ngokudibanisa ukunqongophala kweinsulini nokuxhathisa kwi-insulini. Yenzeka kakhulu ebantwini abanemizimba emikhulu. Inyathelo lokuqala lokulawula udidi lwesibini kukutshintsha indlela yokuphila, ngokuzilolonga,ukutya ukutya okusempilweni nokwehlisa umzimba xa kudingeka. Xa isimo siqhubeka, iipilisi eziselwayo kunye nenaliti yeinsulini ingadingeka.
Isifo seswekile sokukukhulelwa (GDM)
GDM luhlobo lwesifo seswekile esiqala ukufunyaniswa xa ukhulelwe. IGDM idla ngokunyamalala emva kokukhulelwa, kodwa abafazi nabantwana basengozini yokubanodidi lwesibi lwesifo seswekile ekuhambeni kwexesha.
Fumana uvavanyo unyaka nonyaka
Ukufunyanwa ukuba unesifo sewekile kwangoko kubalulekile, njengoko ukuba umzimba utyilwe kwiglukhozi eninzi emzimbeni kungenza umonakalo omkhulu. Abanye abantu abanodidi lwesibini ababonisi zimpawu zaswekile yegazi eziphezulu, ke ukuhlola iswekile ekhemesti yindlela yokuqinisekisa. Uhlolo lwesifo seswekile lwenziwa ngohlolo lwegazi lokuprika umnwe – yiya kwikhemesti ekufutshane okanye ikliniki ukwenza oluhlolo, luyakhawuleza kwaye alubuhlungwanga. Fumana iimpawu zesifo seswekile apha iimpawu eziqhelekileyo zesifo seswekile .
Icala leemvakalelo zesifo seswekile
Inxalenye enkuulu yokuphila nesifo seswekile kukukhangela iicala lwemvakalelo zesisifo. Kwenza umahluko omkhulu ukubanogqirha olungileyo ( Nalu uluhlu lweengcali eMzantsi Afrika iingcali ezigqwesileyo eMzantsi Afrika ngokuchongwanga luluntu). Kuyanceda nokubayinxalenye yoluntu oluphila nesifo seswekile: sithanda ukusebenzisa iDiabetic South Africans kuFacebook, kodwa zikhona neenombolo zamanye amaqela kwintanethi ongazithanda apha online communities.
Isifo seswekile kunye noxinzelelo lwengqondo nazo zixhaphakile, ngako ke kuyanceda ukwazi ngokunokwenzeka. Ukudinwa komzimba yinto ekumele wazi ngayo – ngamanye amaxesha ivakala idinisa into yokujongana nazo zonke ezi zinto zincinci yonke imihla. Kulungile! Ukujongana nokufunyaniswa unesifo seswekile kungumceli mngeni kukodwa. ….. Khumbula ukuba awuwedwa,sonke sisuka apho. Nangona kubonakala ngathi akusoze uyiqondisise, ibalula ngokuhamba kweminyaka.
Previous Post Yintoni udidi lokuqala nolwesibini lwesifo seswekile?
Next Post Ongcweti abahamba phambili ekulweni nesifo sikashukela eNingizimu Afrika
[…] Yintoni isifo seswekile? Yintoni udidi lokuqala nolwesibini lwesifo seswekile? Isicwangciso sendlela yokutya enesondlo Iingcali zesifo seswekile ezigqwesileyo eMzantsi Afrika Indlela yokutya esempilweni yabanesifo seswekile […]